Inkunzi isematholeni – The Ulwazi Programme
Kugcine kufikile ezindlebeni zeSilo ukukhala kwabantu ngodaba lokuthi kube khona izinhlelo ezibhekana nentsha yesilisa esencane ezizoyidodisa ngendlela yokuphila. ISilo uMisuzulu kanye nomama wasendlunkulu babike ukuthi sekuzobakhona uhlelo abeza nalo okuhlelwe ngalo ukuthi likhulise abafana ngokubafundisa ngendlela yokuziphatha, izigaba zempilo kanye nokuthi banikwe izihlabo eziyinkombandlela zokuthi kumele bekhule babe amadoda anjani. Into ejabulisa kakhulu ngaleligxathu elithathwe endlunkulu ukuthi ziningi izinhlelo ezenziwayo ezibhekene netsha yama ntombazane kanye nesimame. Lezinhlelo zihlomelelisa abesimame, ziphinde zibahlomise nangezinto ezithinta umnotho kanye namathuba emisebenzi ayahlukene. Kuhle ke ukuthi kulokhu ke kukhuliswe nabafana ngoba phela nabo bazoba amadoda akusasa. Bazokhula baphathe isizwe baphinde babe abaholi bakusasa emndenini yakubo, emphakathini ebakhulela kuyo ngisho naseNingizimu Afrika nje.
Okuhle kakhulu nge “Nkunzi isematholeni” ukuthi ifike ngesikhathi esikahle impela lapho khona kunesifo esibi sokuhlukumeza kwabe simame kanye nezingane okubizwa ngokuthi yi “Gender Based Violence”. Lokhu kusho ukuthi likhona ithemba ngekusasa lalaba abazobe beyingxenye yeNkunzi isematholeni ngoba phela bazothola ukuqeqesheka ngezinto ezahlukene empilweni. Noma ke imiphumela yalolu hlelo ingeke ibonakale manje kodwa ngokuhamba kwesikhathi iyobonakala. Okungaba kuhle kakhulu ke kodwa ukuthi ziphinde zibe khona nezinhlelo ezithinta ukukhuliswa kwamabhungu nabamnumnzane ngoba phela ibona abasolakala kakhulu ngokuhlukumeza abasimame nezingane. Kuyihlazo impela ukuthi zithi zingaka izinkinga esibhekene nazo njengezwe futhi ezithinta udaba lomhlaba kanye nomnotho kuphinde kube nendaba yokuhlukunyezwa kwabe simame. Siyasincoma isenzo sase Ndlunkulu sokwethula Inkunzi isematholeni kepha siyacela ziphinde zibe khona nezinhlelo zokukhulisa amadoda nawe angasaleli ngemumva.
The newly elected Zulu King, Misuzulu, has initiated a programme called Inkunzi isematholeni which seeks to educate, mentor, empower and help younger men to be better leaders for tomorrow. There has been a huge gap in programmes that seek to empower young boys, as most are focused on young girls and women, therefore it is refreshing to see such initiatives as they will hopefully bear positive results in the future.
Categories Culture, News, People Tags Misuzulu